Ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina moa no miahy ity hetsika ity noho izy misahana ny fampandrosoana ny fandraharahana. Araka izany dia anjaran’izy ireo no mametraka ny tontolo ahafahan’ireo orinasa indrindra ireo orinasa kely vao manomboka sy teraka ireo (startups) hivoatra haingana sy hiteraka fampandrosoana ara-toekarena. Eo ihany koa ny famahana ny olana amin’ny lafiny hetra satria mitaraina ireo orinasa vao miainga ireo ny amin’ny fitakiana hetra sahady amin’izy ireo. Tsy vitan’izay fa mbola hojerena ihany koa ny fanamorana ny paikady sy ny politika amin’ny famatsiam-bola hatao amin’izy ireo. Ankoatra izay moa dia nanambara ny tale jeneraly misahana ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, Ramatoa Raharinjatovo Noro Seheno fa miara-dalana amin’ity ezaka fampandrosoana ny orinasa madinika ity ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Mbola hitohy anio ny hetsika ary hisy ny fifaninanana karakarain’ny BNI Madagascar ho famolavolana tetikasa hananganana orinasa amin’ireo mpandraharaha tanora (startup TJE). Ao ihany koa ny torohevitra sy fanampiana amin’ny lafiny maro ireo tanora manana tetikasa mendrika ireo